silig naxaas ah oo la dhajiyay (sii socda)
Heerka wax soo saarka l. Xadhig la huleelay 1.1 Heerka wax soo saarka ee silig wareegsan oo la dhajiyay: gb6109-90 heerka taxanaha; zxd/j700-16-2001 heerka kontoroolka gudaha ee warshadaha 1.2 heerka wax soo saarka ee siligga fidsan ee dhaldhalaalka: gb/t7095-1995 taxanaha Heerka tijaabooyinka ee fiilooyinka wareegsan iyo fiilooyinka fidsan: gb/t4074-1 ...
Siliggii naxaasta ahaa ee la huwiyey (waa la sii wadi doonaa)
Fiilada la dhajiyay waa nooca ugu weyn ee silig dabayl leh, kaas oo ka kooban laba qaybood: kaariye iyo lakabka dahaarka leh. Kordhinta iyo jilcinta ka dib, siligga qaawan ayaa la rinjiyeeyay oo la dubay marar badan. Si kastaba ha ahaatee, ma sahlana in la soo saaro badeecado buuxiya shuruudaha heerarka iyo macaamiisha. Waa ...
Ma taqaan dhammaan aqoontaas ku saabsan siligga iska -caabbinta?
Wixii siligga iska -caabbinta, awoodda iska -caabbintayada ayaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo iska -caabbinta siligga iska -caabbinta. Markay weynaato awooddeeda, waxaa suurtogal ah in dad badani aysan garanayn sida loo doorto siligga iska caabbinta, mana jiraan aqoon badan oo ku saabsan siligga iska caabbinta. , Xiaobian wi ...
Qiimaha nikkel wuxuu gaarayaa 11 bilood oo sarreysa iyadoo laga filayo baahida xooggan
Nickel, dabcan, waa birta muhiimka ah ee laga qodo Sudbury iyo laba ka mid ah loo shaqeeyayaasha waaweyn ee magaalada, Vale iyo Glencore. Waxa kale oo ka dambeeya qiimayaasha sare dib -u -dhacyada ballaarinta qorshaynta awoodda wax -soo -saarka ee Indonesia ilaa sannadka dambe. Ka dib markii la helay waxyaalo dheeri ah horaantii sanadkan, waxaa laga yaabaa in cidhiidhi ku yimaado ...
Bayonet kululeeyaha, Fur gariiradda kululeeyaha, Nickel Wire, Qaybaha kululaynta, Bayonet Element Element, Wire Resistance,